Ny fitsaboan-tena maharitra rehefa afaka tany Xinjiang · Global Voices teny Malagasy
Miatrika olana fiatiana am-piarahamonina ireo niangana tamin'ny famoretan'i Shina
Voadika ny 14 Oktobra 2019 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, فارسی, Español, Ελληνικά, русский, Français, English
Tursynbek Kabiuly nitsabo tena tany Almaty. Saripikan'i Chris Rickleton ho an'ny Eurasianet.
Nahita ny hafalian'i Oralkhan, vadiny i Tursynbek Kabiuly rehefa tonga tany Kazakhstan tamin'ny volana Febroary taorian'ny 17 volana nangalan'ny manampahefana Shinoa azy.
Saingy saika tsy reny ny vadiny raha tsy niteny mafy .
Nilaza i Kabiuly, teratany Kazakh avy any amin'ny fivondronan'i Emin ao amin'ny faritr'i Xinjiang avaratra andrefan'i Shina fa vaky ny ampongantsofiny havanana noho ny nataon'ny mpiambina iray tao amin'ny foiben'ny polisy izay nitanana azy tsy ara-drariny nandritra ny enina andro tamin'ny herintaona ary zara raha nisy ny sakafo sy ny rano nosotroina.
Rehefa nankany amin'ny trano fivoahana i Kabiuly dia nisotro rano teo amin'ny paompy mba hanalany ny hetahetany. Tsy nahandry ilay mpiambina niandry azy tany ivelany ary namelaka an'i Kabiuly mafy loatra teo amin'ny lohany ka nandeha rà ny sofiny noho ny ratra .
“Vao mainka mety niharatsy tao anatin'ny fohy ny toe-javatra niainako raha nitaraina tany amin'ny lehibeny momba izany aho,” hoy i Kabiuly tamin'i Eurasianet.
Iray amin'ireo gadra miisa sivy teo aloha tany Xinjiang i Kabiuly izay nanana olana ara-pahasalamana rehefa natao ny fizahana ary notsaboina tao amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray tao amin'ny tanàndehibe lehibe indrindra any Kazakhstan, Almaty, taorian'ny famotsorana azy avy any Shina.
Tanteraka ny diany noho ny fanohanana ara-bola handraisan'ny olona maro anjara nokarakarain'ilay mpikaroka Rosiana-Amerikana, Gene Bunin sy ny International Legal Initiative, na ILI izay fikambanana Kazakh mpiaro ny zo.
Anisan'ireo fandaniana lafo indrindra tamin'ny fanentanana fanangona-bola izay nahafahana nanangona vola mitentina 6,000 $ ny fitaovana manampy amin'ny fandrenesana mitentina 500$ izay novidin'ny tetikasa fanangonam-bola handraisan'ny olona maro anjara ho an'i Kabiuly ary miditra amin'ny dingana faharoa ankehitriny izany. Farafahakeliny, voafonja iray hafa no nitatitra ny daroka nahazo azy teo amin'ny lohany nitovy tamin'izany tany am-ponja ka tsy afaka notsaboina intsony.
“Tahaka ny fanomezana avy amin'Andriamanitra izany,” hoy i Kabiuly momba ilay fitaovana. “Tsapako fa miverina amin'ny tenako taloha indray aho.”
Nanomboka tamin'ny volana Septambra 2017 tany Xinjiang ny nofiratsin'i Kabiuly taorian'ny nialany avy any Kazakhstan, izay nametrahany taratasy fangatahana zom-pirenena, nankany Emin hanatrika ny fandevenana ny havany.
Nifanojo tamin'ny famoretana mahery vaika nataon'ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny faritra ny diany izay nanomboka tamin'ny fanagiazana ny pasipaoro an-tapitrisany an'ny Tiorkika sy Miozolomana vitsy an'isa .
Tamin'ny faran'ny taona, novaina indray ho toy ny fanjakan'ny polisin'ny hoavy i Xinjiang, nahitana iireo olom-pirenena vitsy an'isa nampidirina tany amin'ireo foibem-pamonjana natao ho “fanarenana indray”.
Taorian'ny fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Kazakh tamin'ny volana Febroary tamin'ity taona ity ny fiverenan'i Kabiuly izay nilazany fa “fihetsika tsara” avy any Shina tamin'ny famelana ireo foko Kazakhs handeha any Kazakhstan .
Nilaza ny talen'ny ILI, Aina Shormonbayeva; fa olona an-jatony mahery tamin'ireo olona miisa 162 izay nanaovan'ny fikambanany fitarainana tany amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny vondrona mpisolovava (mpanandrateny) iraisam-pirenena hafa ankehitriny no efa niverina tany an-tanindrazany ara-tantara.
Maro tamin'izy ireo, toa an'i Kabiuly no nanomboka ny dingana fangatahana zom-pirenena Kazakh ary manana fianakaviana akaiky azy izay manana pasipaoro Kazakh.
Tsy nanome ny antsipirihany mba hanaporofoana ireo tarehimarika bebe kokoa ho an'ireo olona niverina ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny, izay niditra tsimoramora tamin'ny resaka saropady momba an'i Xinjiang.
Nanatri-maso ny andiana zavamisy mampihorikoditra nataon'ny fanjakana Shinoa tamin'ny olom-pirenena tsy Han i Kabiuly tany Xinjiang tamin'ny fikasan'izy ireo hanova ny fiainana indray ao an-toerana.
Efa niaina talohany tao amin'ny iray tamin'ireo tobim-pamonjana malaza ratsy ankehitriny ireo ny rafozambaviny.
Niatrika fanaraha-maso tsy tapaka sy fisavana avy amin'ireo manampahefana i Kabiuly sy ny zaodahiny raha nangataka ny famotsorana azy tany Shina i Oralkhan sy ny zanany ary ny famotsorana ny reniny avy ao amin'ny toby.
Tao anatin'izany fanindriana izany, namono tena ny anadahin'i Oralkhan, volana maromaro talohan'ny nanafahana ny reniny tao amin'ny toby.
Nandefa hafatra tany amin'i Oralkhan i Kabiuly, nampahafantatra azy ny fikasany hisara-panambadiana aminy – hafatra izay nolaviny avy hatrany satria natao teo ambany fanerena.
Nandritra izany fotoana fandrahonana izany dia nilaza tamin'ny Eurasianet i Kabiuly fa noteren'ny manampahefana tao Emin handoto ny vatom-pasan'ny fianakaviana maromaro izy.
Tsy nilazana ny antony ofisialy nitazonana azy tao anatin'ny fotoana fohy saingy mafaitra i Kabiuly tamin'ny volana Septambra lasa teo.
Fa ny fifandraisany tamin'i Kazakhstan izay mpiara-miasa akaiky indrindra ara-toekarena amin'i Shina ao Azia Afovoany no lohahevitra tamin'ny famotopotorana azy nisesy.
“Nilaza tamiko izy ireo fa ao amin'ny lisitr'ireo firenena misy fampihorohoroana i Kazakhstan kanefa i Shina no firenena mpampihorohoro amiko. Ahoana no hiresahan'ny governemanta izay manao ny olom-pirenena tahaka ny biby fiompy momba ny fampihorohoroana? ”Hoy izy nanontany.
Ireo mpamatsy vola tamin'ny tetikasa fanampiana ara-pahasalamana dia matetika ireo olona izay nanome fanohanana ara-bola tao amin'ny lahatahirin'ny Bunin misy ireo Niharam-boina tao Xinjiang , fandraketana an-tserasera ahitana ny fijoroana vavolombelona mihoatra ny 5.000 ho an'ireo olona niharan'ny famoretana tao Xinjiang izany.
Nilaza ny Bunin fa nifantoka tamin'ireo olona niverina izay mila fikarakaran'ny mpitsabo manampahaizana manokana ny tetikasa.
“Voan'ny kyste amin'ny atidoha izay mila esorina ny voafonja iray. Kanefa miankina amin'ny saran'ny fandidiana no ahafahanay manohana ara-bola izany na tsia ” hoy izy tamin'ny Eurasianet.
Sehatra tsy mbola noresahana tamin'ny ezaka fanohanana ara-bola handraisana anjara ny fahasalamana ara-tsaina kanefa nilaza ireo gadra sy ny havany fa tena ilain'izy ireo maika izany.
Nilaza i Kabiuly fa ny laharam-pahamehany voalohany taorian'ny famerenana ny fandrenesany indray ny famerenana ny tanjany mba hahafahany mahita ny karazana asa fanorenana izay nataony talohan'ny nidirany tao Xinjiang izay nandreraka ny vatany sy novidiany lafo .
Saingy nilaza tamin'ny Eurasianet i Oralkhan fa lasa kaodikaody ny vadiny ankehitriny fa tsy toy ilay izy talohan'ny nandehanany tany Xinjiang tamin'ny taona 2017, ary lasa fahazarany ny manafina ny findainy eny an-joron-trano raha vao tonga ny vahiny satria matahotra ny fihainon-dresaky ny Shinoa izy.
“Maharay antso hafahafa ato an-trano izahay, ary matahotra amin'ireo zanakay izahay,” hoy i Kabiuly nanazava.
“Efa miha-zatra ny finday aho izao,” hoy izy nitsiky rehefa nitopi-maso ny finday avo lenta iray teo ambony latabatra.
Nidera ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny i Shormonbayeva noho ny asany tamin'ny famerenana ireo teratany Kazakhs raikitra tao Xinjiang, saingy nitsikera ny fahatahoran'ny governemanta be loatra an'i Xinjiang izy, izay nahitana an'i Kazakhstan nihataka tamin'ny fanamelohan'ny iraisam-pirenena ny politikan'i Beijing tany an-toerana.
Mametra ny fahafahan'ny fanjakana handray anjara amin'ny ezaka fanarenana ireo niharam-boina io fanapahan-kevitra io. Ary maneho ny fifanoherana tanteraka amin'ny asany amin'ny famerenana indray ny vehivavy sy ny zaza eo anivon'ny fiarahamonina izay niverina avy any Syria tamin'ny ady, izay nolazain'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny fa hahazo tombony amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana sy ara-tsaina tohanan'ny fanjakana.
“Efa miatrika olana amin'ny fiteny sahady ireo Kazakhs avy any Shina satria tsy mahay miteny Rosiana izy ireo ary sahirana rehefa mikarakara taratasy any amin'ny biraom-panjakana mba hangataka ny zom-pirenena sy hitady asa,” hoy i Shormonbayeva.
“Saingy niharan'ny fampijaliana ary mijaly noho ny fikorontanana ara-tsaina ny ankamaroan'ny Kazakhs izay tonga vao haingana teto. Tsy manasokajy azy ireo toy izany anefa ny manampahefana. ”